Monday January 25, 2016 - 20:11:09 in Articles by Super Admin
Waagacusub.info- Xisbiyadda Mucaaradka ee Jamhuuriyadda Somalia ayaa Maxkamadda sare ee dalka u gudbiyay dacwad ay ku weeydiisteen in si degdega Maxkamadda horteeda la soo taago Ra'isulwasaare Cumar Cabdirashiid.
Xisbiyada Siyaasadda ee Soomaaliyeed
Ku: Guddoomiyaha Maxkamadda Sare ee dalka, JFS, = MUQDISHO =(qeeybteeda Dastuuriga ah)
Ujeeddo: Dacwad ka dhan ah Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda JFS
Annagoo ah Homiyayaasha Xisbiyada Siyaasadda dalka, kuna wada saxiixan lifaaqa warqaddaan; waxaan si xushmad leh kuuugu soo gudbinaynaa, Dacwad ka dhan ah Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya (JFS) iyo Wasiirka Wasaaradda Arimaha Gudaha & federalka JFS, si waafaqsan: Qod.4aad Faq.2aad, Qod.46aad Faq.1aad iyo qod.109aad faq.2/d ee Dastuurka KMG JFS. Dacwaddaas oo faahfaahinteedu tahay sidaan hoos ku qoran:
FAAH FAAHINTA DACWADA
Iyadoo ay Muhiim Tahay: meel marinta iyo ansixinta Sharciga Axsaabtu oo ka mid ah tiirarka ugu waaweyn ee ka mid ah xilka Dawladda Federaalka Soomaaliya, sida uu qabo Qod.46aad iyo 47aad ee Dastuurka Federaalka KMG, isla markaana qorshe hawleedka xukuumadda sanadkii tagey ee 2015, taas oo saldhig u ah toosinta siyaasadda dalka, nuxurkeeduna yahay dhismo Dawlad dadku si Dimuqraadiya u soo doorto.
Iyadoo la ogyahay: in Barlamaanka JFS uu u soo gudbiyey Ra’iisul Wasaaraha Hindisa Sharciyeedka Axsaabta bishii May ee sannadkii la soo dhaafay (2015), iyadoo ay ahayd in Golaha Wasiiradda uu soo hordhigo, si dhakhsa ahna uu dib ugu soo celiyo Golaha Shacabka, si Barlamaanku u ansixiyo, isla markaana u noqdo sharci dhaqan gala.
Iyadoo ay cadahay; ilaa iyo hadda in aan dib loogu soo celin Barlamaanka Hidisa Sharciyeedkaan Axsaabta
Waxaan garowsaney; Sababaha keenay in xafiiska Ra’iisul Wasaaruhu, Hindisa Sharciyeedka Axsaabtaa dib ugu soo celin waayo Golaha Shacabka mudadaas dheer ay tahay xil gudasha la’aanta xafiiskiisa iyo in Ra’iisul Wasaaruhu si shaqsi ah oo ula kac ahna uu u xayiray meel marinta iyo u soo gudbinta Barlamaanka Hindisa Sharciyeedkaan Axsaabta.
Waxaan ku eedaynaynaa; Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya, Mud. Cumar Cabdirashiid, gudasha la’aan xil qaran oo ah asaasi iyo xasaasiba. Iyo in uu diidmo, dafirid iyo hor istaagid xuquuq dastuuri ah oo aan leenahay, iyo asagoo dhanka kele faafinaya dacaayad aan u qalmin xilka qaran ee uu hayo, taasoo ka dhan ah nadaamka axsaabta badan in dalka lagu dhaqo.
Haddaba annagoo ah muwaadiniin Soomaaliyeed ahna hogaamiyayaasha Xisbiyada Siyaasadda Soomaaliyeed, Maxkamada Sare ee dalka iyadoo tixgelinaysa xaaladda murugsan ee dalku marayo siyaasad ahaan, xalkeeduna yahay ansixinta Xisbiyada oo tartan doorasho Dimoqraadiyada la galo, isla markaasna Maxkamaddoo isticmaalaysa awoodeeda ku xusan Qod.109C/1(c), ee Dastuurka qaranka, waxaan si qadarin mudan uga codsaneeynaa:
In Maxkamada sare horteeda looga yeero R/wasaaraha Xukuumada JFS. Mudane Cumar Cabdirashiid iyo Wasiirkiisa Arr.Gudaha, lana weeydiiyo waxa ku kalifay u hogaansanaan la`anta Dastuurka qaranka iyo weliba hor istaagidda fulinta mashruuca dastuuriga ah ee Hindisa Sharciyeedka Axsaabta muddo ku dhow sanad.
In lagu amro Xukuumadda in ay u hogaansamaan oo ay fuliyaan waajibkooda Dastuuriga ah sida uu farayo Qod.99/c ee Dastuurka
In lagu amro hay’adaha Dawladda ee ay khusayso inay Ansixiyaan, Meel Mariyaan, Dhaqan geliyaan Hindisa Sharciyeedka Xisbiyada Siyaasadda Soomaaliyeed muddada ugu gaaban iyo sida ugu dhaqsaha badan iyadoo loo hogaansamayo Dastuurka.
In Maxkamada Dastuurku noo sugto xuquuqda Dastuuriga ah ee siyaasadeed iyo tan muwaaddinimo ee dadweeynaha taasoo Xukuumaddu ay dooneeyso in ay duudsiiso, haddii arintaas cid wax ka qabata la waayana ay horseedi karto in shacabdku qaado tallaabooyin kale oo sharciga waafaqsan oo uu xuquuqdiisa dastuuriga ah ku raadsanayo.
Mudane Guddoomiye, waxaan si buuxda ugu kalsoonahay in dacwadayadaan aad ku qaadi doontid garsoor caaddilnimo sharci ku qotoma.
FG: Fadlan fiiri Liiska Xisbiyada Siyaasadeed ee soo gudbiyay dacwadan oo saxiixan.